Variable iTunes kodhi: chakakwana chipo cheMadzimambo | IPhone nhau
Tiri pakati pemwaka weKisimusi, zvinoreva kuti haisi nguva yekuishandisa semhuri chete, asi zvinoonekwawo kuti tinoita chipo chisingaenzaniswi kune vedu vadiwa. Zviri nyore kwazvo kukanganisa paunenge uchipa chipo, chakanyanya kuwanda kutenga chimwe chinhu chausingade kuna waunopa icho, asi chimwe chinhu chisingambokundikani kupa mari kana, chii chiri nani mubhurogu nezve Apple, Yakachinjika iTunes kodhi kuidzikinura muzvitoro (kwete zvehardware) yeiyo block.
Chii chinonzi iTunes Rolling Code? Kutanga uye pamwe zvakanyanya kukosha, aya makodhi anopiwa ne Apple Yakatenderwa Mutengesi, saka, kubva pakutanga, hatifanirwe kunetseka nezve waranti yako. Nezvakatsanangurwa izvi, zvinogona kunge uri kufunga nezvekuti nei tichifanira kusarudza iyi sarudzo ye Startselect uye kwete kuenda zvakananga kunobva, ndiko kuti, kuApple, uye mhinduro iri mune sarudzo dzaanotipa, zvakanyanya kusanduka kupfuura izvo zvatiinazvo patinotenga iTunes chipo kadhi.
1 Nei iTunes Rolling Code chiri Chipo Chakakwana cheMadzimambo
2 Zvipo zvine kukosha kwe € 15 kusvika € 500
Nei iTunes Rolling Code chiri Chipo Chakakwana cheMadzimambo
Paunotenga imwe iTunes kadhi kadhi kubva kune yepamutemo Apple webhusaiti isu tinogona chete kubhadhara nekiredhiti kadhi. Ini pachangu, ini handioni chero dambudziko neiyi nzira yekubhadhara, ndanga ndichiishandisa kwemakore, asi iwe ungazoshamiswa nekuchengetedzwa kune vanhu vandinoziva, zvekuti vanowanzo kundibvunza kuti ndiite chero odhita online. Kana isu tisingade kupa kadhi redu rechikwereti uye isu tichida kupa chipo che iTunes kadhi, tinogona kutenga iyo inoshanduka iTunes Code nekuibhadhara. kiredhiti kadhi, PayPal, chinja kana kunyange BitCoins.
Chimwe chikonzero chinonakidza ndecheavo vedu vanosiya zvese kusvika kunguva yekupedzisira. Pakutenga chero mhando yekodhi pamhepo, vatengesi vanotivimbisa kuti chipo chichauya mune asingasviki maawa makumi maviri nemana, izvo zvinogona kukurumidza zvikuru kana nekusingaperi zvichienderana nekuti tinoda riinhi chipo. Startselect achatitumira iyo kodhi maminetsi mashoma mushure mekuita iyo kubhadhara, saka tinokwanisa kutumira chipo maawa mashoma Varume Vatatu Vakachenjera vasati vatanga rwendo rwavo nemapara akasiyana.
Zvipo zvine kukosha kwe € 15 kusvika € 500
Chipo chatinotumira chinogona kunge chiri chemari yatinoda, chero bedzi kukosha kwayo kuri pakati pe € 15 ne € 500. Izvi zvinoreva kuti. Saka kuti iye anogamuchira chipo haana kana mubvunzo, tinogona zvakare kutumira iyo kodhi neemail, mune iyi kesi isu tinogona zvakare kusanganisira meseji yakaita se "Happy RRMM zuva! Hechino chipo chekuti iwe ushandise pane chero chaunoda, asi heano mamwe mazano ».
Saka ikozvino unoziva. Kana iwe usina chokwadi chekupa, pakati pezvakanakisa zvipo zvinogara zviri mari, uye musiyano iTunes Code inogona kuve sarudzo yakanakisa yeVatatu Madzimambo Zuva. Sei uchitambisa nguva uchifunga nezve chekupa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Rolling iTunes kodhi: chakakwana chipo cheMadzimambo kune chero Apple mushandisi